मास्क | Ratopati
मास्क नलगाई हिँड्ने १०३० जनालाई जरिवाना access_timeमंसिर २०, २०७७
काठमाडौँ । कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनी दाङ प्रहरीले मास्क नलगाएर लापरवाही गरी कोरोनाको जोखिम बढाएको आरोपमा एक महिनामा १०३० जनालाई पक्राउ गरी जरिवाना तिराएर कारबाही गरेको छ । लापरवाहीका कारण संक्रमण बढ्ने सम्भावना हुने जोखिम बढ्ने भन्दै प्रहरीले मास्क नलगाई हिँड्ने...
के मास्कको प्रयोगले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुन्छ ? access_timeभदौ १७, २०७७
कोरोनाभाइरसको महामारीले मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइदिएको छ । भाइरसको संक्रमण रोक्ने एक प्रमुख उपाय मध्येको एक हो मास्कको प्रयोग । कोरोनाभाइरसको अहिलेसम्म कुनै खोप तथा अचुक औषधि छैन त्यसैले पनि यसबाट बच्ने उपयुक्त उपाय भनेको जनस्वास्थयका नियमहरुको कठोर पालना नै हो...
मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना access_timeसाउन ८, २०७७
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले मास्क नलगाई हिँडडुल गर्नेलाई कारवाही गर्न थालेको छ । गृहमन्त्रालयले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलन नदिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मास्क नलगाएर बाहिर हिँड्नेलाई रु १०० जरिवाना गर्न गत असार २२ गते निर्देशन थियो । ...
मास्क नलगाई घरबाहिर निस्किनेलाई पक्राउ गर्न गृहको निर्देशन access_timeअसार २२, २०७७
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । असार १ गते नै सरकारले निर्देशन जारी गरेपनि कार्यान्वयन नभएकाले रिमाइन्ड मात्र गरिएको गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय ...
मास्कको प्रयोगमा अलमल र कचकच ! access_timeअसार २२, २०७७
हालसम्मको विज्ञानलाई नै चुनौती दिँदै संसारभरि फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ को हालसम्म कुनै भरपर्दो खोप वा औषधि फेला पर्न सकेको छैन । अत्यन्तै तीब्र दरमा संक्रमण फैलिने, हालसम्म विश्वव्यापी रुपमा जनालाई संक्रमित तुल्याइसकेको र जनाको ज्यान लिइसकेको यस महाव्याधिका विर...
चीनबाट २५ लाख मास्क ल्याइने access_timeचैत ११, २०७६
सरकारले चीनबाट २५ लाख मास्क ल्याउने भएको छ । विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न चीनबाट २५ लाख मास्क र १ लाख कीट ल्याउने तयारी गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडका अनुसार मास्क र कीट एक ...
मास्कको जोहो ! (फोटोफिचर) access_timeचैत ७, २०७६
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरस महामारीको सन्त्रासबीच देश अर्ध–लकडाउनको स्थितिमा पुगेको छ । राजधानी काठमाडौँ बिस्तारै सुनसान बन्न थालेको छ । सरकारको आग्रहबीच मानिसहरु अत्यावश्यक कामबाहेक घरमै बस्न थालेका छन् । कोभिड–१९ को नाम दिइएको कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट बच्न...
राजधानीबाट फेरि १० लाख मास्क बरामद access_timeचैत ५, २०७६
काठमाडौं । राजधानीबाट फेरि सर्जिकल मास्क बरामद भएको छ । कोरोना भाइरसको आतंकका बीच मास्कमा कालोबजारी हुने गरेको गुनासोसँगै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको प्रहरीले राजधानीको सानो भर्‍यााङबाट १० लाख मास्क बरामद गरेको हो । महानगरीय अपराध महाशाखाब...
रोट्रयाक्टको कोरोना सचेतना अभियानः पैदलयात्रीलाई नि:शुल्क मास्क वितरण access_timeचैत ४, २०७६
पोखरा । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिइरहेको नोवेल कोरोना भाइरसबाट बच्न पोखरामा अभियान सुरु भएको छ । पोखरा रोट्रयाक्ट क्लव अफ न्युरोड र रोट्रयाक्ट क्लव अफ अन्नपूर्णले संयुक्त रुपमा सचेतना अभियान थालेका हुन् । सचेतनाको पहिलो अभियान स्वरुप क्लबले पोखराको पृथ्वीचोकमा बा...
पोखरामा ग्यास र मास्कको कृत्रिम अभाव access_timeचैत ४, २०७६
पोखरा । कोरोनाको त्राससँगै यतिबेला पोखरामा ग्यास र मास्कको अभाव सिर्जना भएको छ । पोखराका धेरै डिपोहरुमा ग्यासको अभाव छ । पोखरा रामघाटकी दिलमाया गुरुङ्ग दशभन्दा बढी डिपोमा ग्यास खोज्न हिँडिन् तर उनले ग्यास पाउन सकिनन् । बल्लतल्ल आफन्तको सहयोगमा उनले एक सिलिन्डर ग्यास पा...
प्रहरीले बरामद गरेको मास्क बिक्री वितरण गर्न बाटो खुल्यो, सरकारले दियो निर्देशन access_timeचैत ३, २०७६
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीले बरामद गरेका मास्क बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बृहद जनहितलाई ख्याल गर्दै बरामद सो मास्क बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मास्कको मूल्य र नमुनासहितक...
के हुन्छ प्रहरीले बरामद गरेको १० लाख बढी मास्क ? access_timeचैत ३, २०७६
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास फैलिरहँदा नेपाली बजारमा पनि मास्कको चरम अभाव भइरहेको छ । यही बेला मास्कमा कालोबजारी हुँदा नेपाल प्रहरीले छापा मारेर ठूलो परिमाणमा मास्क बरामद गरेको छ । आइतबार र सोमबार मात्रै प्रहरीले १० लाखभन्दा बढी मेडिकल मास्क बरामद गरे...
कालोबजारी गर्न लुकाइएको मास्क ओसार्न प्रहरीलाई आठवटा गाडी लाग्यो access_timeचैत ३, २०७६
काठमाडौँ । विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास बढिरहेका बेला नेपालका अधिकांश बजारमा मेडिकल मास्क अभाव देखिएको छ । बजारमा मास्क अभाव भएसँगै अन्य समयको भन्दा १० गुणाभन्दा बढी मूल्यमा उपभोक्तालाई कालोबजारीको रूपमा मास्क बिक्री भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसक्दा...
पाल्पामा ढाकाको मास्क उत्पादन access_timeचैत २, २०७६
बुटवल । करुवा र ढाका उत्पादनले विशेष पहिचान बोकेको पाल्पामा बजारको माग पूर्ति गर्न ढाकाको मास्क उत्पादन सुरु गरिएको छ । तानसेनमा रहेको पाल्पा मदन पोखरा ढाका पसलले ढाकाको मास्क उत्पादन थालेको हो । उद्योगका सञ्चालक कमल भण्डारीका अनुसार ढाकाको मास्कको अ...
चीन पठाउने भन्दै प्रहरी आफैले मास्कको डिल गरेपछि... access_timeचैत २, २०७६
काठमाडौँ । शनिबार महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भु र नयाँबानेश्वरले ७८ हजार सर्जिकल मास्कसहित ८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कालोबजारी गर्न लुकाएर राखिएको अवस्थामा प्रहरीले छापा हान्दा उक्त परिणामको सर्जिकल मास्कसहित ८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । महानगरीय प्रह...
छत्रदेव गाउँपालिकामा मास्क उत्पादन सुरु access_timeफागुन ३०, २०७६
जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिकाले मास्क उत्पादन शुरु भएको छ । बजारमा मास्क पाइन छाडेपछि पालिकाले उच्च सतर्कता अपनाउँदै स्थानीय टेलर्स व्यवसायीमार्फत उत्पादन शुरु गरेको पालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले बताए । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण ने...
कोरोनाभाइरसबाट बच्न कुन मास्क कसरी प्रयोग गर्ने ? (भिडियोसहित) access_timeफागुन २९, २०७६
कोरोनाभाइरस अर्थात कोभिड–१९ विश्वका १२४ देशमा फैलिइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले कोभिड–१९ले विश्वव्यापी रुप लिएको र सतर्क रहन विश्वलाई आव्हान गरिसकेको छ । डब्लूएचओले नेपाललाई पनि उच्च जोखिममा राखेको छ । विश्वले कोभिड–१९ को महामारीब...
व्यवसायीले ७ रुपैयाँमा मास्क किनेर ५ रुपैयाँमा बेच्ने access_timeफागुन २७, २०७६
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले औषधि, खाद्यान्न लगायतका सामाग्री आगामी ६ महिना सम्मलाई पुग्ने रहेको बताएका छन् । त्यस्तै अहिले बजारमा अत्यधिक माग रहेको मास्क अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री कार्...